Sida loogu beddelo naqshadeyntaada 'Photoshop' nambarka CSS wax ka yar hal daqiiqo | Abuurista khadka tooska ah
Laga soo bilaabo imaatinka nooca CS6, Adobe ayaa laga hirgaliyay Photoshop xulasho aad u faa'iido badan oo loogu talagalay qaabeynta iyo horumarinta naqshadaha websaydhka. Hawlgalku waa aad u fudud iyo dhamaanba soomi. Iyada oo loo marayo arjiga waxaan awood u yeelan doonnaa inaan soo saarno go'yaal qaab-cascas ah oo tixraac ahaan u qaadanno qaababkeenna iyo lakabyada qoraalka. Nidaamku waa u fududahay sidii loo horumarin lahaa jees jeeskeena, nuqul nuqulka nooca waxyaabahayaga oo lagu dhajiyo warqaddayada.
Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan gaar ahaan maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan ku aragno isbeddelada naqshadeena qaab muuqaal ah iyo waqtiga dhabta ah. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo si aad u adeegsato ikhtiyaarkan oo aad u hesho waxqabadka ugu badan:
1 Isku day inaad noqoto mid sax ah
2 Isku habee dhamaan astaamaha walx kasta
3 La shaqee kooxaha lakabyada
4 Tallaabooyinka lagu beddelayo
Isku day inaad noqoto mid sax ah
Si aad u hesho natiijo xirfad leh, waxaa lagugula talinayaa inaad tixgeliso cabbiraadaha iyo saamiga boggaaga. Deji qiyaasta Ballaca iyo Heigh-ka shaxanka aad naqshadeynayso ku dhaji mockup-kaaga. Markaad nuqul ka sameysid nambarka CSS waxaan dhigeynaa walxo kasta oo tixraac ahaan u qaadanaya masaafada u dhexeysa pixels u dhexeeya curiyaha iyo geesaha shiraacyada. Sidoo kale tixgeli cabirrada iyo sababaha kala sarreynta ee aad ku dari doontid naqshadeyntaada oo ay ku jiraan isku-xidhka cunsur kasta iyo kala-goynta u dhexeeya mid kasta oo ka mid ah si ay u siiso akhristayaasha ugu badan.
Adeegsiga tilmaamaha iyo qawaaniinta is-dhexgalka ayaa kaa caawin doona inaad dhisato qaab nadiif ah, shey nadiif ah oo ay ku jiraan dhammaan walxaha si dhammaystiran isugu habboon.
Isku habee dhamaan astaamaha walx kasta
Ikhtiyaarka lagu nuqulayo nambarka CSS wuxuu na siinayaa suurtagalnimada naqshadeynta bartayada si sax ah oo weyn iyadoo la adeegsanayo qaab iyo qaabab qoraal ah Waxyaabaha ay ka kooban tahay lakab kasta ayaa loo soo guurin doonaa isla markaana waxaan si dhakhso leh ugu dhejin karnaa warqadda qaabkeena. Laga soo bilaabo lakabyada qaabka, ku soo qaado qiimayaasha goobaha soo socda:
Buuxi midabka (oo ay ku jiraan wejigooda)
Hooska hoos u dhig
Laga soo bilaabo lakabyada qoraalka waxaan ku qaban karnaa qiimaha soo socda:
Hoosta ka xariiqay
Isku hagaajinta qoraalka
Maskaxda ku hay taas oo dejiso mid kasta oo ka mid ah qiimayaashan si aad u bixiso qaabka aad raadineyso.
La shaqee kooxaha lakabyada
Shaqadani waxay tarjumaysaa shaqadeena oo ay abaabuleen laba nooc oo fasal ah, mid koox kasta oo isu keenta lakabyo qaabab ama qoraal ah iyo fasal lakab kasta oo ka mid ah noocyadan. Fasal kasta oo koox ah wuxuu metelaa doonaa qayb ka mid ah qaybaha waalidka oo ay ku jiri doonaan waxyaabo canugga wax u sheega oo u dhigma lakabyada la geliyay koox kasta. Sidan oo kale, qiimaha kore iyo bidix ee weelasha cunugga ayaa lagu dejin doonaa iyadoo la tixraacayo weelka waalidka. Waa inaad maskaxda ku haysaa in ikhtiyaarkan aan lagu heli karin walxo caqli gal ah oo aan lagu dabaqi doonin wax ka badan hal lakab isku mar mooyaane haddii aan iyaga la kooxaysiin.
Tallaabooyinka lagu beddelayo
Markaad sameysid tusaalahaaga, waxaad shakhsiyeysay qayb kasta oo aad uquruxisay kooxo, waxaad kaliya ubaahantahay inaad raacdo talaabooyinkan:
Tag gudiga lakabyada oo dooro mid ka mid ah labadan xulasho:
Midig-guji qaab ama lakabka qoraalka ama koox lakabyo ah oo xulo Nuqul CSS liiska macnaha guud.
Xullo qaabab ama lakab qoraal ama koox lakabyo ah, ka dibna dooro ikhtiyaarka Nuqul CSS ee ku jira liiska lakabyada.
Ku dhaji lambarka dukumiintigaaga qaab-dhismeedka oo ku dheji bogaggaaga adoo adeegsanaya html5.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » Sida loogu beddelo naqshadeyntaada 'Photoshop' nambarka CSS wax ka yar hal daqiiqo